मोटरसाइकल दाइजो दिन नसकेको कारण बिहेको दिनमा केटानै आएनन् ! – Khabar PatrikaNp
मोटरसाइकल दाइजो दिन नसकेको कारण बिहेको दिनमा केटानै आएनन् !
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेलले घटना के रहेछ आफूले बुझीरहेको बताउँदै दोषीलाई समातेर कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने–बेहुली पक्षले यदि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाहेरी दियो भने दाइजो कसुरको मुद्दामा हामीले बेहुला पक्षमाथि कारबाही गर्छौं ।आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ!
Nextकोरोना जितेर घर फर्किएको अढाइ महिनामा फेरि संक्रमण
पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा सहित केही राजदूतको नियुक्ती रोकियो, कारण यस्तो छ
बिर अस्पताल काण्ड : रामलखनको लास परिवारले बुझे… ! पशुपति लगिदै (हेर्नुहोस भिडियो)
भारतमा आइतबार कोरोना भाइरस (कोभिड १९) सङ्क्रमितको संख्या ७० लाख नाघ्यो